Ajjeechaafi Hidhaan Kan Duubatii - Caboowanci.com-Oromia
Ajjeechaafi Hidhaan Kan Duubatii
August 21, 2016 August 21, 2016 Nadhani	0 Comments
Ajjeechaafi hidhaan kan duubatii hin deebisine Ummata Oromoo akkasumas angafa fi utubaa biyya sanaa kan ta’ee kana gaafii isaa akka salphaati ukkaamisanii bira darbuun kun furmaata otuu hin taanee rakkoo cimaa fi balaa guddaa akka isaan irraan ga’uu beekuu maaltuu isaan dhoowwee? Gaafii Ummata Oromoo jaarraa dheeraadhaaf ukkaamisaa turan sana hardhaa moo akkasummati ukkamisanii bira darbuun akka hin danda’aminne abjuu isanitti fakkachuun isaa hin ooluu.
Jaalatanis jibbanis Oromian harka isaanii jalaa baatee jirti. Beekanis wallaalanis gafiin Oromo biyya Oromia fi lafa Oromia irrati illmmaan Oromootin deebii’uun ishii hin afu qarree irra gahee jira. Garuu mootummaan wayyaneefii bitamitoonni wayyanee yeroo adda addaa mirga fi gaafii Oromoon gaafachaa jiru maqaa adda addaa itti mooggaasanii akka Oromoon gaafii abbaa biyyummaa isaa fi ofiin of bulchuu isaa gaafachaa hin jirreeti dhiheesaafi qopheesaa turan irra jirus. Yeroo hundaa Oromoo ofiin akka of bulchaa jiru, Oromoon murtoo enyuu ala akka jiraachaa jiru itti fakkeessa dubachaa jiru. Garuu dhugaa jiru ni beeku, ni mookkisina maal ofii fidu fi kkf tufiidhaan Ummata ammana gahu kana xiqqeesanii bira darbuu filatanii jiru.
Yeroo tokko tokko moo namoonni muraasitti fi dhaabinni ykn moo Sabni tokko tokko jechuu ni danda’ama jiru fakkaatanii fi itti fakkeessanii jiraachuu ni danda’uu. Kan bayyee nama ajaa’ibu moo Ummata keessa harka caala keessayyuu Ummata Oromo ala kan jiran haala gaararra (Chameleon) dhibban dhibbatti (100%) qabu dha. Kana jechuun yeroo jiru fakkaachuu, haala jiru fakkaachuu, mootummaa jiru fakkachuu, rakkoo jiru fakkachuudhaan fira fakkaatanii wajjin jiraatu. Kanaafuu moo ummanni hardha farra qabissoo Oromoo ta’aa jiraniifi dura dhaabachaa jira hundaa gaafa Oromoon abbaa biyyuumma isaa goonfatee biyya isaa harka isaa jala galfatee, ummanii haala aararraa qaban sunis akkuma hardhaa wayyanee tplf jala hiriirran kun hundaa garagarannii Oromo jalas hiriirrun isaani waan hin oollee dha.
Kanaafuu ammumaisaan ajjeesan, hidhan, dhiiga gad naqan, lafee caccabisan, dhugaa Oromoo gara dabarsan, ummata Oromoo salphisan, qabeenya Oromoo saaman, fi kana kan fakkaatu hundaa raawwatan qabissonis itti jabaachaa deema. Ummuriin garboonfataa wayyanee gabaabataa deema. Wagaa 25 walaallummaadhaa fi doggogoran kana raawwachaa ture kan jedhuu tarii akka sababaatti kaasuu danda’uu laata? Ammas yoo ta’ee erga lubbuun Oromoo kumaatamati lakka’amuu ajjeefamee, qbeenyii Oromoo Trilliyyonatti lakka’amuu saamamee, fi KKF hundaa raawwatanii booda amma gahaanii ibsa adda addaa baasaa jiru. Ibsi isaan baasan kun gaafa tokko akka gaafii jalaa akka isaan hin baasinne beekutu nu irra jira.
← Liqaa Biyya Alaa Doollarii Billiyyona 22
በኦሮሞ ፕሮቴስት ተሰብሮ የነበረው የወያኔ ወገብ →